Antenimierampirenena : saro-toerana indray ny birao maharitra | NewsMada
Antenimierampirenena : saro-toerana indray ny birao maharitra
Mijoro ny birao maharitry ny Antenimierandoholona. Saro-toerana kosa ny eo anivon’ny Antenimierampirenena, misy ny fangatahana hanova ny birao maharitra.
Eo am-pananganana birao maharitra ny Antenimierandoholona, amin’izao fotoana izao. Ny eo anivon’ny Antenimierampirenena kosa, saro-toerana tanteraka… Mandeha indray ny resaka ny amin’ny tokony hanovana ireo mpikamban’ny birao maharitra. Efa misy aza ny tsilian-tsofina ny amin’ny fisian’ny fanangonan-tsonia amin’izany, eny amin’ny lapan’i Tsimbazaza, na tsy misy miteny mivantana aza izay solombavambahoaka anontaniana. Inona ny marina? Ho hita eo ihany…
Na izany aza, misy ireo solombavambahoaka velon-taraina amin’ny fomba fitantanan’ny birao maharitra. Eo, ohatra, ny amin’ny hoe fisian’ny fiangarana amin’ny fampandehanana ireo solombavambahoaka manatontosa iraka any ivelany. Misy aza ny alefa mangingina na afenina amin’izany. Saika ireo efa mpandeha ihany no mandeha, na ireo akaiky ny filoha sy ny birao maharitra. Itakian’ny sasany fangaraharana koa, ohatra, ny amin’ny fitantanam-bola hoe tsy mazava be ihany.
Hiverina indray ny tsy fahamarinan-toerana
Amin’ny ankapobeny, ireo solombavambahoaka manohana ny fitondrana no miady sy mitady izay hanovana ny birao maharitra. Efa mandeha aza ny tombantomban’izy ireo amin’ny fizarana andraikitra na seza, raha ny tsilian-tsofina mandeha. Saika tsy mahazoazo ny amin’ny fomba fanendrena izay mandeha any ivelany kosa ny ankamaroan’ireo solombavambahoaka, na ny sasany eo anivon’ny birao maharitra aza. Mandidy dia homana samy irery ny filoha sy izay akaiky azy?
Ahina hitohy ihany ny tsy fahamarinan-toerana eny anivon’io andrimpanjakana io, raha efa tsy hita be ihany izay tena fifandanjan-kery politika: mivadibadika lava, tsy azo antoka… Efa hatramin’izay no miotrika izay karazana lonilony politika izay, fa mitady izay anton-javatra hanamarinana ny fanonganana ny birao maharitra fotsiny ny sasany. Ny hafahafa, misy amin’izy ireo niady mafy tamin’ny fametrahana ireo birao maharitra amin’izao fotoana izao. Lasa kilalao ratsy ny raharaham-pirenena?